AUTOTRADE GOLD - ATG - Robot Trading Gold - XAU/USD
Robotyada ganacsiga ▼
Robot ganacsi oo loogu talagalay suuqa dahabka (xauusd).
Robot ganacsi oo loogu talagalay suuqa cryptocurrency.
Robot ganacsi oo u heellan suuqa saliidda.
Robot ganacsi oo loogu talagalay suuqa Forex.
Robots ganacsi oo ku salaysan badeecada.
Maalgelinta Crypto ▼
Maalgelinta Big Data cryptocurrency.
Ku maalgashi dahabka iyo dheemanka crypto-kaaga.
Ku maal gasho hantida maguurtada leh xayiraadda Ethereum.
Iibso, kaydi oo sug in ka badan 250 cryptocurrencies
Xannibaadda & Crypto
Tutorial Casharrada fiidiyowga, laga bilaabo xannibaadda illaa cryptocurrencies
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies'
Aqoonta aasaasiga ah ee ku saabsan cryptocurrency kasta
Nidaamka deegaanka ee AutoTrade
website rasmiga ah PantheraTrade
Ku xidh atg-system.com
Ku xidh atcbot.io
Soo gal MetaCapital
Ku xidh Equiti
Robot Ganacsi Dahab
AutoTrade Gold 5.0 waa a robot ganacsi Indooniisiya toos ah oo ku salaysan suuqa dahabka. Sidoo kale lagu naaneeso ATG, Goldodhaah, Nafta Gold ama EA Robot Gold Isticmaalayaasha, waxay higsanaysaa faa'iido maalinle ah oo u dhaxaysa 0,5 iyo 1,5% ee raasumaalkaaga. Marna ma lumin kartid wax ka badan 3% maalintii. Robot-kani waxa uu ka ganacsadaa qaabka maqaarka oo waxa uu furayaa hal boos markiiba. Si qumman, haddii ATG 5 ay diiwaan geliso khasaare, waxay isku dayi doontaa inay ka dhigto faa'iidooyinkeeda inta lagu jiro maalinta ganacsiga labaad. Sidoo kale soo hel Crypto AutoTrade, Robot ganacsi oo cusub oo samaynaysa 7/7 maalin faa'iido Bitcoin.
Isdiiwaangeli AutoTrade Gold Casharrada la cusboonaysiiyay
📀 EA ATG 5 diyaar u ah in la soo dejiyo gabi ahaanba broker.
Qiimaha Liisanka 1 ee Ganacsiga Gawaarida Gold
Maalgashiga ugu yar
Lagu taliyay maalgelinta guud ee ugu yar
Faa'iido bille ah
Faa'iidooyinka robotka AutoTrade Gold
Maamul oo xakamee lacagahaaga goobta broker LegoMarket LCC iyadoo la isticmaalayo app-ka MetaTrader 4 ou la broker doorashadaada adoo iibsanaya oo soo dejisanaya robot-ka shabakada Pansaka (tallaabada 2 ee casharka hoose). Kaliya adiga ayaa marin u leh maalgashigaaga: Maalgelinta ugu horreysa + dakhliga la soo saaray + dulsaarka isku dhafan.
Ganacsi otomaatig ah
Ma jiro software la rakibo. Xirfad ganacsi looma baahna.
Xalka ganacsiga waxaa soo saaray Pansaka, oo diiradda saaray suuqa dahabka.
Waxtarka ± 15%
Celcelis ahaan dakhliga dadban ee 15% bishiiba.
In ka badan 2 sano xaaladda suuqa dhabta ah.
Ku bilow khibrada ugu yaraan raasumaal ah $ 250.
Natiijooyinka hufan ee codsigaaga MetaTrader 4.
15% dakhliga/bishii oo leh AutoTrade Gold
leh Ganacsiga Gawaarida Gold 5.0
🚧 Fiiro gaar ah, ma jiro muuqaal dambe oo ka shaqayn kara Youtube ilaa inta la dayactirayo goobta Pantheratrade wali waa halkeedii. Tababarka hoos ku qoran ayaa si joogto ah loo cusbooneysiin doonaa.
Hayso xisaab Crypto ah
Platform kuu ogolaanaya inaad iibsato oo aad iibiso cryptocurrencies, laakiin sidoo kale si aad u quudiso aad robot iyo broker LegoMarket
Qalabka API ee ku xidha ATG broker LegoMarket
Ka iibso shatiga Pansaka
Madal isku xidhka oo u ogolaanaysa iibsashada shatiga noloshaada.
Gallery sawir Autotrade Gold on Instagram
Xisaabinta faa'iidooyinka ATG 5.0 iyadoon lagu darin dulsaar isku dhafan
Jadwalka hoose waa in loo qaataa tusaale ahaan lagamana yaabo inuu ka tarjumayo xaqiiqda dhabta ah. Waxay muujineysaa isbeddelka caasimadaada iyadoo loo eegayo wadarta la xareeyay, iyadoo lagu saleynayo a kordhinta kororka 15% bishiiba. Xiisaha isku dhafka maalinlaha ah laguma tixgelin xisaabintan. Haddii aad la noqoto dakhligaaga bil kasta, waxay ku qaadan doontaa qiyaastii 6 bilood inaad dib u soo ceshato maal-gashigii ugu horreeyay ee 4 bilood ah haddii aadan waxba la laaban.
+ 300.000 maalgashadayaal Natiijooyinka TGA 5
Debaajiga: 500 €
+ liisanka 2 ($ 224)
Debaajiga: 1500 €
Debaajiga: 5000 €
+ liisanka 3 ($ 560)
Debaajiga: 10000 €
⚠️ Xusuusin iyo waano muhiim u ah maalgalliye kasta
Xusuusnow in tani ay tahay maalgashi khatar ah, in aad maalgelinayso lacag aanad u baahnayn inaad noolaato iyo in yoolkaaga koowaad uu yahay inaad sida ugu dhakhsaha badan ugu soo ceshato raasamaalkaaga bilowga ah sida uu qabo qorshahaaga maalgashiga.
Tusaale ahaan xeelad : Waxaan ku maalgeliyay $10.000 AutoTrade Gold. Anigoon ka bixin iyo 5 bilood gudahood, waa inaan laba jibaaraa raasamaalkeyga. Isla markii aan gaaray wadarta $22.000, waxaan bilaabayaa inaan kala baxo $2000 mar kasta oo uu robotku soo saaro dhowr toddobaad gudahood. Markaa waxaan ka noqdaa $22.000 ilaa $20.000 mar kasta oo aan gaadho. Sidaa darteed waxaan ku helaa raasamaalkeygii ugu horreeyay wax ka yar 9 bilood waxaanan soo saaraa dakhli dadban oo dhan $3000 bishii (20.000 x 15%) mahadsanid Autotrade Gold.
5 shati ayaa la heli karaa iyadoo kuxiran awooddaada ganacsi
Shatiga waa la cusboonaysiin karaa, ie, waxaad bixin doontaa oo kaliya farqiga u dhexeeya shatiga hadda iyo shatiga la rabo. Robotku kuma ganacsado raasamaal dhan $100. Haddii aad ka baxdo oo aad dhaafto $50 ee koontada ganacsiga, waxaad waayi doontaa shatiga.
tusaale ahaan : Shatiga 2 waxa uu ku kooban yahay $5000 (raasamaal kayd ah + dakhli maalinle ah). Tani waxay ka dhigan tahay in shatigan, marka aad dhigato raasamaalkaaga, tusaale ahaan $3000 oo aad kasbato $2000 dakhli, waxaad gaadhi doontaa ugu badnaan $5000 la oggolaaday. Halkaas, robot-kaagu wuxuu joojin doonaa ganacsiga. Markaa waa inaad soo ceshataa qayb ka mid ah dakhligaaga ama aad qaadato shatiga sare. Xusuusnow inaad cusboonaysiiso ka hor inta uusan robot-kaagu istaagin, haddii kale waa inaad la xiriirtaa taageerada farsamada ama waxaad gacanta ku soo celinaysaa xiriirka robot-ka ee goobta. Nidaamka ATG. Badhan ayaa loo bixiyay ujeedadan.
guud ahaan raasamaal u dhexeeya 100 iyo 500 $.
Iibso liisanka 1
guud ahaan raasamaal u dhexeeya 100 iyo 5.000 $.
Iibso liisanka 2
guud ahaan raasamaal u dhexeeya 100 iyo 30.000 $.
Iibso liisanka 3
guud ahaan raasamaal inta u dhaxaysa 100 iyo 1.000.000 $.
Iibso liisanka 4
raasumaalka ugu yar ee 1.000.000 $.
Iibso liisanka 5
ATG 5 Taageerada Farsamada
Su'aalaha soo noqnoqda ee ku saabsan Autotrade Gold 5.0
Qaar ka mid ah macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Ganacsiga Ganacsiga
Waxaan qabaa su'aalo ku saabsan AutoTrade Gold, Pantheratrade, Pansaka ama Nidaamka ATG
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid AutoTrade Gold 5.0, waxaan kugula talinayaa inaad u dhawaato kafaala-qaadayaasha tooska ah. Taageerada farsamada ee ka timid PantheraTrade waxa uu ka kooban yahay 70 shaqaale ah. Si aad iyaga ula xiriirto, waxaad u baahan doontaa inaad furto tigidh oo aad si sax ah ugu sharaxdo codsigaaga Ingiriis oo aad ku lifaaqdo lifaaq si aad u fahanto. La xidhiidh iyaga oo keliya haddii ay dhibaato dhacdo, haddii kale wac kafiilkaaga. Dhibaatooyinka shatiga, la xiriir taageerada Pansaka, mashaakilaadka ku xira robot-kaaga, door bidayso goobta Nidaamka ATG.
Fur tigidh taageero farsamo RDV Telegram si aad ula socoto wararka
Qaar ka walwal qaba Autotrade Gold 5.0?
Taageero farsamo Panthera wuxuu na weyddiinayaa, kafiil ahaan, inuu kaa caawiyo dhibaatooyinka aad la kulmi karto laakiin waxaa lagama maarmaan ah inaad adigu codsato shaqsi ahaan adoo furaya tikidh https://panthera.support
Tallaabada 1 / PantheraTrade
Tallaabooyinka la raaco si aad isku diiwaan geliso robotka Autotrade Gold 5
Waxaan ku talinayaa isticmaalka a Ciwaanka Yahoo ama Gmail markaad isdiiwaangeliso. Qaar baa dhibaatooyin kala kulmay in lagu xaqiijiyo iimaylka Hotmail, Live, Wanadoo, Cinwaanka Laposte...
Isdiiwaangeli AutoTrade Gold 5.0
Buuxi 5 goobood oo loo baahan yahay:
1 - Samee magacaaga isticmaale
2 - Ku qor magacaaga koowaad iyo magacaaga dambe
3 - Dooro dalka aad degan tahay
4 - Geli nambarkaaga gacanta
5- Geli emailkaaga (gaar ahaan Gmail)
Aqbal Shuruudaha Adeegga, ka dibna gudbi
📨 Autotrade ayaa hadda email kuugu soo dirtay eraygaaga sirta ah. Waa la bedeli karaa hadhow. Haddii aadan ku helin 5 daqiiqo gudahood, waxaad codsan kartaa inaad iska illowdo erayga sirta ah bogga gelitaanka.
Haddii aadan haysan koontada loo yaqaan 'cryptocurrency', waxaan kugula talinayaa, haatan, si loo abuuro koonto Binance, Coinbase, Kraken... Ka fogow wax-isweydaarsiga xannibaya ka-noqoshadaada in ka badan 2 saacadood sida Crypto.com, tusaale ahaan. Waxaad ka iibsan kartaa crypto on Binance kaarka deynta. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ku xayirmi doontaa xadka ka bixista oo xadiday bangigaagu. Si aad u samayso xawaalad bangi oo aad ku shubto lacag badan, waxaad isticmaali kartaa adeega SEPA at Binance.
Isdiiwaangeli Binance tutorial Binance
Haddii nambarka taleefankaagu uu hore u diiwaangashan yahay, dib ayaad u celin kartaa oo ku beddeli kartaa 06 336, haddii aad ku nooshahay Faransiiska. Isticmaal calaamadda wicitaanka sidii fursad labaad.
Marxaladda 2 / Pansaka
Isdiiwaangeli Pansaka si aad u hesho shatiga ATG 5
Pansaka waa shirkadda maamusha dhammaan shatiyeynta badeecadaha ganacsiga ee Autotrade. Ha iloobin in ay tahay inaad haysatoUSDT ama Litecoin LTC beddelkaaga si aad u iibsato shatiga.
Iska diiwaangeli Pansaka
Lambarka Tixraaca: 10110618
Magaca hore + Magaca dambe
Kaarka aqoonsiga oo cusub ama lambarka baasaboorka
Password + xaqiijin
Buuxi foomka Koontada Crypto:
- Dooro USDT
Cinwaanka Crypto: Sheeg ciwaanka dhigaalka USDT
(Ethereum ERC 20 network) kaliya
Marxaladda 3 / Pansaka
Sida loo iibsado ama kor loogu qaado liisankaaga autoGold 5.0?
Bogga hore ee shirkadda Pansaka, guji tabka Barnaamij Gaarka ah> Iibso Xidhmada Mustaqbalka oo dooro shatiga iyadoo loo eegayo qaddarka ganacsiga aad rabto inaad dhigato.
💡 Waxaan kugula talinayaa inaad ku bilawdo liisanka 1 iyo dhigaalka $ 110 si aad u falanqeyso ganacsiga robotka iyo awooda uu u leeyahay inuu soo saaro dakhli dadban. Waxaad markaas cusboonaysiin kartaa shatigaada adiga oo bixinaya kaliya farqiga u dhexeeya mid kasta oo iyaga ka mid ah. Markaa ku bilow iibsashada Litecoin (LTC). Binance oo leh xaddi 250 € kaarka deynta.
Si aad u bixiso shatigaaga oo aad u dhigto lacagtaada broker, waxaan kugula talineynaa inaad iibsato oo aad ku bixiso Litecoin (LTC) si sahlan, xawaaraheeda iyo khidmadaha macaamilka ee hooseeya.
Waxay qaadataa hal saac in shatigaagu uu firfircoonaado adoo isticmaalaya CoinPayment.
Marxaladda 4 / Pansaka
Hubinta iyo bixinta liisankaaga
Tusaalahan, waxaan doortay shatiga 2 ee robotka ATG ee goobta broker LegoMarket
Badhanka 1: Guji badhankan si aad u doorato lacag bixinta cryptocurrency. Soo-bandhig ayaa furmi doona, dhagsii badhanka Crypto kadibna xaqiiji.
Badhanka 2: Xaqiiji oo Gal qaansheegta
Marxaladda 5 / Pansaka
Qiimaha iyo qiimaha doolarka oo kooban.
Kadib guji badhanka Lacag -bixinta.
Tallaabada 6 / Bixinta lacagta
Bixinta liisankaaga Autotrade Gold gudaha Litecoin (LTC), oo leh CoinPayment.
Ku buuxi macluumaadkaaga biilasha dhanka bidix, sida magacaaga koowaad, magacaaga dambe iyo ciwaanka iimaylka (hubi in aanu khalad ku jirin ciwaankaga emailka). Dhanka midig, dooro cryptocurrency Litecoin (LTC) qiimaheeda macaamil ee hooseeya.
Ugu dambayn, guji badhanka buluugga ah ee bidixda, hoosta emailka, si aad u ansixiso foomka. Ma jirto gabi ahaanba baahi loo qabo in la iska diiwaan geliyo CoinPayment si loo dhamaystiro wax kala iibsiga.
Bog cusub oo CoinPayment ah ayaa furmi doona oo ku tusi doona lacagta sidoo kaleCinwaanka LTC halkaas oo aad u baahan doonto inaad ku wareejiso Litecoin (LTC) aad hore u soo iibsatay sarrifkaaga (Binance, Coinbase, iwm).
On Binance, halkan waa isku xirka ka iibso Litecoin kaarka bangiga.
Tallaabada 7 / Bixinta lacagta
Dhamaystirka bixinta liisankaaga Autotrade Gold.
U tag beddelkaaga sida Binance, samee ka bixitaanka saxda ah atCiwaanka LTC waa la codsaday. Xusuusnow inaad ku darto 0,001 LTC inta aad codsatay haddii kale wax kala iibsiga waa la diidi doonaa waxaana lagugu soo celin doonaa CoinPaiement. Lacag ayaa lagu dabaqi doonaa Coinpayment beddelkeeda.
Muuji cinwaanka LTC ee qaataha. Kani waa cinwaanka (xarig) loo gudbiyo Coinpayment.
Wareejinta waa in lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo shabakada LTC.
Tilmaan qaddarka LTC adoo ku daraya 0,001 qiimaha ugu dambeeya
Kadib ansax foomka.
Waxaad ku heli doontaa emayl xaqiijin ah adoo Binance iyo CoinPayment oo kuu sheegaya in wareejinta lagu guulaystay. Haddii aad qalad samaysay, ha argagixin! Waxaad heli doontaa iimayl lagugu soo celinayo qadarka dhowr daqiiqo gudahood iyada oo loo marayo CoinPaiment oo ka soo horjeeda khidmadaha wax kala iibsiga. Hubi spamkaaga Waa inaad sheegtaa kaaga Cinwaanka dhigaalka LTC.
Tallaabada 8 / Pantheratrade
Furitaanka a xisaabta MT4 ka ganacsiga Pantheratrade.
Si loo isticmaalo aaladaha ganacsiga ee kala duwan ee ay bixiso shirkadu PantheraTrade, waxaad u baahan tahay inaad furto a xisaabta caadiga ah ee MT4. Tani waxay udub dhexaad u noqon doontaa dhammaan alaabooyinka laguu diyaariyay.
Si aad tan u samayso, guji xidhiidhka Xisaabaadka Joogtada ah>Akoonka MT4. Kadib guji badhanka Samee Akoonka MT4
Tallaabada 9 / Pantheratrade
Beddel Furaha ku meel gaadhka ah ku helay email.
Waxaad hadda heshay magacaaga isticmaale iyo eraygaaga sirta ah ee ku meel gaarka ah iimaylka. Magacaagu waa Login Login.
Hadda waxaan bedeli doonaa eraygaaga sirta ah ee ku meel gaarka ah.
Si aad tan u samayso, dhagsii xidhiidhka dhanka bidix ee hoose ee shaashadda: Dib u deji erayga sirta ah ee Login. Geli eraygaaga sirta ah ee ku meel gaadhka ah ee lagu helay iimaylka goobta ugu horeysa, ka dibna geli erayga sirta ah ee cusub ee labada goobood ee hoose.
Tallaabada 10 / Pantheratrade
Samee akoonkaaga Autotrade Gold.
Marka hore, guji xiriirka Xisaabaadka CopyTrade> Koontada MT4. Guji badhanka buluuga ah ee ku yaal dhanka sare ee midig: Samee Xisaab Cusub
Dooro AutoTradeGold in Select Category, ka dibna riix badhanka Samee Akoonka MT4.
Miis waa inuu ka soo baxaa bog cusub. Ku ilaali Koontadaada MT4 Login iyo MT4 Investor Passwordkaaga. Waxa kale oo lagugu soo diri doona email ahaan. Xeerarkani waxay kuu oggolaanayaan inaad raacdo ganacsiyada iyo sidoo kale akoonkaaga maalin-maalin ah.
Tallaabada 11 / Pantheratrade
bixi kaaga bedelno si loo xaqiijiyo akoonkaaga
Si loo ansixiyo akoonkaaga, waa inaad keentaa mid ka mid ah saddexda qaybood ee aqoonsiga ee la codsado (kaarka aqoonsiga, baasaboorka ama shatiga wadista). Fiiro gaar ah, dukumeentiga aqoonsiga waa inuusan dhicin haddii kale KYC-gaaga si toos ah ayaa loo diidi doonaa.
Dooro nooca aqoonsiga aad rabto ka dib sawir ku qaado taleefankaaga casriga ah.
Geli lambarka aqoonsiga aad rabto gudaha goobta: Geli lambarka aqoonsiga.
Soo rar sawirkaaga (kordhin sax ah: jpg, jpeg ama png). Ha dhaafin miisaanka 1 Mo. Si aad u wanaajiso sawirkaaga ka hor intaadan dirin, isticmaal goobta ጥቃቅንpng.com.
Bogga Update bedelno, waa inaad ku aragto heerkaaga qaabka "Pending" Waqti sii kooxda Pantheratrade si loo xaqiijiyo dukumeentiga aqoonsiga.
Tallaabada 12 / Pantheratrade
Bixi kaaga Foojarka si loo xaqiijiyo ciwaanka dhigaalka
Foojarka Profile waa diiwaangelinta ciwaanka dhigaalkaaga si aad u hesho guulaha robot-ka. Cinwaankani wuxuu noqon karaa BTC, ETH ama USDT erc20/trc20. Waxaan ku talinaynaaUSDT trc20 (trx) kharashaadka wax kala iibsiga ee hooseeya iyo xasilloonida.
Riix bogga Foojarrada Profile markaa badhanka Iibso foojar cusub
Dooro crypto: ETH, BTC, USDT TRC20 ama USDT ERC20, dabadeed ansixi
Qeybta hoose ee bogga, dhagsii badhanka hubinta gacanta, waxaa laguu wareejin doonaa Coinpayments si aad u bixiso
Tallaabada 13 / Pantheratrade
update Update Profile.
Foojarka Profile-ka waa la bixiyaa oo koodka foojarkaaga waxa uu ka muuqdaa shaxda, tiirka Foojarka. KYC kaaga waa la ansixiyay Waxaan hadda dhameyn doonaa buuxinta Profile-ka.
Marka hore, geli ciwaankaaga USDT trc20 iyo/ama erc20 ka dibna ansixi
Waxaad email ahaan ku heli doontaa koodka OTP Koodhkan waa in la geliyo goobta ugu horeysa.
Goobta labaad, geli code-ka foojarka oo aad ka heli doonto bogga Foojarka Profile, Tiirka foojarrada. Kadibna ansixi
Tallaabada 14 / PantheraTrade
Sida loo dhigo raasamaalkaaga ganacsi PantheraTrade ? (1/3)
Waxaa loo malaynayaa in shatiga uu ku jiro habka bixinta.
Waxaan ku laabaneynaa goobta PantheraTrade si loogu xareeyo raasamaalka ganacsiga broker Suuqa Lego LCC.
Guji XISAABTA COPYTRADE> MT4 Deposit
Kadib guji badhanka MT4 Deposit Cusub
Caadi ahaan tani waa deebaajigaagii ugu horreeyay PantheraTrade, laakiin haddii aad markii dambe rabto inaad kordhiso raasumaalkaaga, waa inaad ku soo noqotaa tallaabadan. Maskaxda ku hay in lacagta dhigaalka ah ay sidoo kale kuxirantahay doorashada liisankaaga.
Lacagta US $: tilmaam cadadka aad rabto inaad ku shubato doolar
Dooro Koontada: lambarkaaga koontada ATG Gold
Calaamadee sanduuqa loogu talagalay shuruudaha isticmaalka, ka dibna soo gudbi foomkan
Marxalad ? / PantheraTrade
Ku keydin raasamaalkaaga Bixinta Lacagta. (2/3)
Buuxi macluumaadkaaga biilka, oo ah magacaaga koowaad, magaca dambe iyo cinwaanka emaylka.
Xulo Litecoin (LTC).
Ugu dambeyn, dhagsii badhanka buluuga ah ee dhanka bidix.
Bog cusub ayaa ka furmi doona CoinPayment kaas oo ku siinaya cadadka iyo sidoo kale ciwaanka aad ku shubayso Litecoins LTC.
Note Fadlan ogow, kani wuxuu noqon doonaa cinwaan dhigaal oo cusub. Ma noqon doonto cinwaanka deebaajiga oo la mid ah liisankaaga.
Ku keydi raasumaalkaaga ganacsiga PantheraTrade. (3/3)
Isla khalkhal gelin sida iibsashada shatiga. Iyadoo Binance, bixiso lacagta saxda ah adiga oo ku daraya 0.001 qaddarka LTC ee la codsado: https://www.binance.com/fr/.../crypto/LTC.
Gali cinwaanka LTC qaataha, kan lagu sheegay Coinpayment.
Muuji qadarka LTC, ka dibna ku dar 0,001 qiimaha ugu dambeeya.
☕️ Sug dhawr tobanaan daqiiqo. Waxaad ku heli doontaa emayl xaqiijin ah adoo Binance iyo CoinPayment si ay kuu ogeysiiyaan in wareejinta si sax ah loo sameeyay.
Ilaa iyo inta taageero farsamo ee Ganacsiga Ganacsiga Gold ma ansixin macaamilka, kuma arki doontid qaddarkaaga barnaamijkaaga MT4.
Tallaabada 13 / Pansaka / ATG-System
Iskuxirka Nidaamka ATG iyo Pansaka
Ku xidh nidaamka ATG
Si aad ugu xidho https://atgbot.co, isticmaal isla iimaylka iyo erayga sirta ah ee shidnaa Pantheratrade.
Sug dhowr daqiiqadood si loo tixgeliyo liisankaaga nidaamka. Habsocodkani wuxuu ansax u yahay iibsashada liisankaaga koowaad iyo sidoo kale hagaajinta liisamadaada xiga. Cala waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku biiriso liisanka cusub koontadaada ganacsiga.
waad sameyn doontaa iimayl hel ka atgbot.co (sidoo kale hubi spamkaaga).
Soo celi Koodhka foojarka iyo aqoonsiga foojarka ee ku jira iimaylka.
Tag shabakada ATG System adoo isticmaalaya furahaaga Pantheratrade oo dhaqaaji shatigaaga: https://atgbot.co/user/ea/activate
Nuqul ka dhaji walxaha ku yaal meelaha la codsaday.
Si fiican u tilmaan: Waxaan haystaa Xisaab Ganacsi
Xulo adiga compte Gold
Kadib ansaxi foomkan.
⚠️ Hubi in shatigaagu uu "ku xidhan yahay". Guji badhanka "Refresh" haddii loo baahdo ilaa ay tani dhacdo. Isku day dhowr saacadood ka dib haddii shabakadu buuxsanto, haddii kale fur a Tigidhka taageerada farsamada ee Nidaamka ATG si ay u dhaqaajiyaan robot-kaaga ATG 5.
Tallaabada 14 / MetaTrader 4
Sida loola socdo dakhligaaga abka MetaTrader 4 ?
MT4 waa codsi mobilada bilaashka ah oo kuu oggolaanaya inaad raacdo horumarka dakhligaaga. Haddii aad ku jirto Android ama IOS, waxaad si fudud uga heli doontaa Dukaamada. Si fiican u fiirso astaanta, waxaad u baahan tahay nooca 4 ee MetaTrader.
Marka la rakibo, waxaan u habeyn doonaa akoonkaaga ganacsiga. Si taas loo sameeyo, waa in aad ka heshay iimaylka PantheraTrade leh 4 xog muhiim ah.
Soo gal: XXXXXX
Password Master: Ta liisankaaga
Furaha Maalgashiga (akhri oo keliya): XXXXXX
App-ka MT4, dhagsii Settings (astaanta midig ee hoose)> Akoonka cusub> Ku gal akoon hadda jira.
Sanduuqa raadinta (sare), ku qor: LegoMarketLCC2-LIVE
Username: Login (lambarada). Waxaad sidoo kale ka heli kartaa bogga guriga ee Pantheratrade (Akoonka MT4).
Furaha: Furaha Maalgeliyaha (akhri kaliya). Haddii aad lumisay, isku day furaha sirta ah ee aad isticmaashay Pantheratrade.
Tallaabada 15 / PantheraTrade
Sida looga noqdo dakhligaaga iyo / ama raasumaalkaaga xili walba ?
Waxa kaliya oo aad kala bixi kartaa crypto-ka ku xusan talaabada 2. Haddii aad mid muujisay USDT cinwaanka Crypto, waad heli doontaa USDT. Fadlan ogow in ka bixitaanku ay yihiin ugu yaraan $ 50 iyo ugu badnaan $ 2000 maalintii xisaabaadka ka hooseeya $ 100.000. Wixii ka dambeeya $100.000 oo la shubay (oo aan la kasban), waxaad kala bixi kartaa 10% caasimadda maalintii. Tiri 15 ilaa 35 $ khidmadaha wax kala iibsiga (iyadoon loo eegin xaddiga la doonayo), iyadoo ku xiran lacagta la doortay.
Ka noqosho ka samee PantheraTrade
Si aad uga baxdo, ku noqo goobta PantheraTradeguji Macaamilka> Ka bixitaanka.
Xulo lacagta aad gelisay goobta cinwaanka crypto markii aad isdiiwaangelinaysay (USDT / LTC ama wax kale), ka dibna ansax.
Sawirka 1 - Buuxi macluumaadka la codsaday:
Ilaha: Dooro mid ka mid ah akoonkaaga MT4 ama akoonkaaga lacag celinta. Waxaad sidoo kale ka soo kaban kartaa jeebkaada gudaha (lacag kasbashada guddiyada kuwa kafaala qaadaya).
Lacagta US $: xaddiga aad rabto inaad kala baxdo doolar
Aqbal shuruudaha ka dib Xaqiiji. Waxaa laguu wareejin doonaa bog cusub oo waxaad isla markaa heli doontaa iimayl uu ku jiro koodka OTP
Sawirka 2 - Hubi oo aqbal ka noqoshada:
Xagga hoose ee boggan, dib u geli eraygaaga sirta ah PantheraTrade ama 2FA adoon illoobin hadda inaad ku darto koodka (Email OTP). Haddii aadan helin, waxaa laga yaabaa inay ka timaado iimaylkaaga (hotmail, yahoo...). La saxiixashada Gmail dhib malaha. Haddii loo baahdo, fur tigidh oo weydii inay ciwaankaaga hadda ku beddelaan ciwaanka gmailka.
Kadibna ansixi wax kala iibsiga
Waa inaad sugtaa celcelis ahaan 24 saacadood (marka laga reebo maalmaha fasaxa ah) in lacagta lagala baxo laguugu soo shubo Sarrifkaaga. Tani waxay ku xidhan tahay farqiga wakhtiga u dhexeeya Indonesia iyo dalka aad degan tahay.
Sida loola xiriiro taageerada farsamada Autotrade Gold ?
Si aad ula xiriirto mid ka mid ah 70 qof ee ka dambeeya taageerada farsamo ee Pantheratrade, u sii soco sida soo socota: had iyo jeer u turjun fariintaada Ingiriis ama Indooniisiyaan (google translate waa saaxiibkaa), toosan oo sax, keen caddaynta wax kala iibsiga (txid), naxariis iyo ixtiraam. La xidhiidh taageerada haddii ay dhibaato jirto, maaha inaad su'aalo waydiiso. Kafiilka, shabakadaha bulshada iyo golayaasha waxay leeyihiin hadafkan. Ha dirin dhowr fariimo, waa wax aan faa'iido lahayn oo ma ogola in dhibaatooyinka si dhakhso ah loo xalliyo, liddi ku ah.
Fur tigidhka taageerada PantheraTrade
Mawduuca: 4 ama 5 eray oo lagu sifeeyo dhibaatadaada
Xulo Waaxda: Taageerada Xisaabta / Maaliyadda / Shabakadda
Dooro Qeybta: Xulashadu waxay ku xiran tahay beerta kore
Fariin: Ku sharax dhibaatadaada Ingiriis ama Indooniisiya
Xiriirka Sawirka: Wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto sawir sharraxaad leh
Jawaab ayaa markaa laguu soo diri doonaa 24 saac gudahood (marka laga reebo maalmaha fasaxa ah). Samir yeelo.
Ma jeclaan lahayd kafaala Robot-ka ATG ka PantheraTrade ?
Haddii aad sidoo kale rabto inaad u gudbiso asxaabta oo aad siiso faa'iido bille ah oo ku dhow 15%, waxaad u baahan doontaa inaad siiso xiriiriyahaaga tixraaca ee ku yaal bogga Partnership> Dashboard
URL -ka loo diro gudbintaadu wuxuu u ekaan doonaa sidan: https: //pantheratrade.live / diiwaan /? r = IB ...
Doorka a runboow waa inuu hago oo la taliyo mid kasta oo ka mid ah ilmihiisa mustaqbalka, laga bilaabo diiwaangelinta ilaa soo kabashada dakhliga, laga soo wareejiyo bangiga ilaa cryptocurrency, sharraxaadda halista, waqti ku qaadista taageerada farsamada ... ku jiri doonaan golaha iyo naxariis.
Guddiyo kafaalaqaad Autotrade Gold
Talooyinka soo gal ee isticmaalayaashii hore Pantheratrade
Loogu talagalay maalgashadayaasha ka diiwaan gashan Pantheratrade ka hor Maarso 18, 2022 iyo kan raba inuu ku xidho nooca cusub ee Pantheratrade.
Tag bogga: https://live.pantheratrade.tech
Geli ciwaanka iimaylka galitaanka akoonkaaga hore PantheraTrade dabadeed dhagsii badhanka ansaxinta
Waxaad ku heli doontaa iimaylka magacaaga isticmaale iyo eraygaaga sirta ah ee ku meel gaadhka ah kaas oo ay tahay in lagu dhex daro boggan: https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
⚠️ Hadii aanad helin iimaylkan, raac talaabooyinkan:
Tag bogga: https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
Guji erayga sirta ah ee illoobay
Qor magacaaga isticmaale
Magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah ee Pansaka
Dadka iska diiwaangaliyay AutoTrade Gold kahor Sebtember 1, 2021, waxaa laga yaabaa inaadan ku helin faahfaahinta gelitaanka Pansaka iimayl ahaan. Waa kan xalka si loo helo:
Xiriirinta dib -u -celinta: https://pansaka.co.id/panel/login.php
Guji xiriirka: Forgot your password?
Waxaad imaan doontaa bog kale.
Guji xiriirka: Ilowday Aqoonsiga Isticmaalaha?, ka dibna geli cinwaanka emailkaaga.
Waxaad heli doontaa iimaylkii ugu horreeyay oo leh aqoonsiga gelitaankaaga. Tani waa isku xigxiga tirooyinka.
Ku noqo bogga galitaanka Pansaka: https://pansaka.co.id/panel/login.php, ka dibna mar labaad guji xiriirinta: Ma illowday eraygaaga sirta ah? adiga oo tilmaamaya aqoonsiga isku xirkaaga (tirooyinka).
Waxaad awoodi doontaa inaad tilmaamto magaca isticmaalahaaga iyo furahaaga cusub si aad ugu xirto Pansaka.
Diirada saar maamulaha guud ee Autotrade, Mr. Dinar Wahyu Saptian Dyfrig
Diinaar Wahyu Kenzo waa shaqsi caan ka ah Indonesia. Maalgaliye la aqoonsan yahay, wuxuu mas'uul ka noqday IT iyo qaybta tignoolajiyada cusub isagoo ka wakiil ah ururka ARTI. (Ururka Robot Trading ee Indonesia) la socodka qaababka ganacsiga sharci darrada ah ee Indonesia iyo ururka APLI oo maamula suuq-geynta shabakadaha ilaa 1984. Nin qalbi weyn leh, mahadsanid faa'iidada shirkadda, in ka badan 10 oo baakadaha cuntada ah ayaa loo qaybiyay Indonesiankii u baahnaa intii lagu jiray muddada Covid. Isagu sidoo kale waa maareeyaha shirkadda RBG ee ku xaddidan England, oo ku taal bartamaha suuqa sarifka calamiga ah, wuxuuna kafaala-qaadaa koox kubbadda cagta Indonesian ah, oo u dhiganta horyaalka 000 ee Faransiiska.
Dinar Wahyu Saptian Dyfrig (dhexda) CEO Autotrade / Pansaka iyo Bambang Soesatyo, afhayeenka baarlamaanka Indonesia.
Diiwaan gelin kasta waxaa laga sameeyaa isku xirka gudbinta!
Oo aniga i rumee, wax dambe ma yeeli doonto!
Ma fududa inaad bilawdo tacaburka noocaan ah marka aanad lahayn khibrad ganacsi ama cryptocurrency hore. Tani waa sababta, aan u oggolaado naftayda inaan ku raaco, si aan kaaga caawiyo inaad u samaysato xisaabaadkaaga dhexdooda broker (dillaal) iyo kanaga robot ganacsi, ka jawaab su'aalaha khuseeya oo bixi taageero farsamo. Haddii aadan ka heli karin xiriirka xiriirka la leh robotsyada qaarkood, sababtoo ah ma rabo inaan sheego: midkoodna waan hubinayaa, ama waan ka shakisanahay. Intaa waxaa dheer, waa inaad awood u yeelatid inaad maareyso taageerada farsamada oo aad si sax ah u raacdo tixraacyadaada, markaa ma qaadanayo khatarta ah inaan ku siiyo xiriirinta gudbinta iyada oo aan la xakameynin.
Broker ASIC ayaa diiwaan gashan
🥇 Raasamaal min. ± $ 250
Ku sugitaanka Pansaka
La heli karo 2022
caasimadda min. ± 50 €
caasimadda min. ±$10
Ma wax macluumaad ah ayaa kaa maqan?
Ha ka waaban inaad ila soo xiriirto 💬 Telegram si aan kuula taliyo oo aan ku siiyo caawimaaddayda.
Iska ilaali khiyaanooyinka Forex ee shabakadda
Soo ogow liiska madow ee shirkadaha aan la fasaxin iyo bogagga ay soo saartay AMF. Midkoodna aaladeena iyo sidoo kale brokerkuma jiraan.
Waxqabadkii hore dammaanad kama qaadi karo waxqabadka mustaqbalka.
Ma jiro waxqabad sare oo aan lahayn khatar sare. Suuqa saamiyada, waxqabadkii hore daruuri iskama soo celinayso.
Ma jiro talo maalgashi oo ku taal boggan
Ganacsigu waxa uu kuu soo bandhigaa khataro khasaare u dhigma oo dhigaalka ah waxana uu ku haboon yahay kaliya macaamiisha xog-ogaal u ah ee haysta awood dhaqaale oo ay ku xamilaan khatartan. Natiijadii hore ma tilmaamayso natiijooyinka mustaqbalka. Soo booqdaha ayaa ka mas'uul ah isticmaalka macluumaadka la helay oo dhan oo qaata dhammaan khataraha la xiriira isticmaalkan. Gaar ahaan, waxay ku xiran tahay booqdaha inuu qaado dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo ilaaliyo sharafta caasimaddiisa. Robots-trading.fr.
Akhriso annaga Shuruudaha Adeegga iyo annaga Axdiga hufnaanta.